सेयर बजारको रोचक किस्सा: कसरी हुन्छ रु.२०० भन्दा रु.५०० सस्तो ? - Laltin.com
सेयर बजारको रोचक किस्सा: कसरी हुन्छ रु.२०० भन्दा रु.५०० सस्तो ?
सामान्य अवस्थामा हामी केहि किन्न परेमा त्यो वस्तुको मुल्य हेर्छौँ तर कुनै कम्पनीमा लगानी वा सेयर किन्दा भने मूल्यकै भरमा मात्रनिर्णय लिन मिल्दैन । मुल्यले मात्र त्यो कम्पनीको फेयर प्राईस बताउदैन । त्यसैले मूल्य बायक त्यसको मुनाफा र आम्दानी (ई.पी.एस) लगायत अन्य इन्डिकटरको तुलना गरिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि बैँकहरु पालना गरेको नयाँ लेखा मापदन्ड,नेपाल फाईनान्सियल रिपोर्टिङ सिस्टम(एनएफआरएस)का आधारमा एउटै ढाचाँमा रहि फरक फरक शीर्षकमा आम्दानी र खर्च प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। खुद मुनाफाका आधारमा (ई.पी.एस),मूल्य आम्दानीअनुपात (पी.ई),नेटवर्थ आदिको गणना गरिन्छ।
कम्पनीले आर्जन गरेको खुद मुनाफालाई कुल सेयर संख्याले भाग गर्दा त्यो कम्पनीको ई.पी.एस निकाल्न सकिन्छ। हालको मूल्यलाई ई.पी.एसले भाग गर्दा पी.ई आउछ। पी.ई रेसीयो निकै महत्वपू ईन्डिकेटर हो।कुनै पनि कम्पनी सस्तो वा मह्ङगो भनेर तुलना पी.ई ले दिन्छ। अर्थात १ रुपैया कमाउन कति रुपैया तिर्न पर्ने हो भन्ने ईकाइ नै पी.ई रेसीयो हो `। सामान्य भाषामा कुनै कम्पनीको पी.ई २० छ भने त्यो कम्पनी किन्ने लगानीकर्ताले रु.१ कमाउनको लागि रु.२० खर्चेका हुन्छन्।
अर्थात पी.ई जति थोरै भयो त्यति राम्रो हो त??
सामान्यत १५ भन्दा कम पी.ईलाई राम्रो मानिन्छ तर यो रेसीयो मात्र पूण भने होईन् । पी.ई ले कम्पनीको ग्रोथलाई समेट्न सकदैन्,त्यसैले पी.ई.जी (PEG) रेसीयोको प्रयोग गरिएको पाइन्छ।
आ.व २०७७/७८को आधारमा वाणिज्य बैँकहरुको यो ई.पी.एस र पी.ई चार्ट
साभार; ई.पी.एस र पी.ई चार्ट
उदाहरणको लागि रु.२४४ को CBL सस्तो कि रु.५१२ को SANIMA ?
मूल्य कै आधारमा भन्ने हो भने सिभिल बैँक सानिमा बैँक दुई गुना सस्तो देखिन्छ। तर पी.ईको आधारमा सिभिल बैँकको पी.ई ३७.७१(Q4-2077/78) छ भने सानिमा बैँकको पी.ई २१.७८(Q4-2077/78) मात्र छ।यसको अर्थ रु.१ कमाउनका लागि सिभिल बैँकका लगानीकर्ताले ३७.७१ तिर्नुपर्छ भने सानिमा बैँकका लगानीकर्ताले मात्र २१.७८ तिरेका छन् ।त्यसैले सानिना बैँक सिभिल भन्दा (३७.७१-२१.७८=१५.९३)१५.९३ अंकले सस्तो देखिन्छ।
बैँकको नाम हालको मुल्य ई.पी.एस पी.ई
सिभिल बैँक रु.५१२ ६.४७ ३७.७१
सानिना बैँक रु.२४४ २३.५१ २१.५१
अतः मूल्यकै आधारमा महृङगो र सस्तो छुट्टयाउन मिल्दैन्। विश्वको सबै भन्दा मह्ङगो मूल्य भएको कम्पनी वर्कशायर हाथवेको पी.ई ६.१३ मात्र छ। पी.ईलाई लगानी डवल हुने समयसँग पनि तुलना गरिएको पाईन्छ यदि कुनै कम्पनीको पी.ई १० छ र आम्दानी बराबर छ भने १० वर्ष पछि त्यो कम्पनीमा गरिएको लगानी डवल हुन्छ । थोरै पी.ई र निरन्तर ग्रोथ भएको कम्पनीमा लगानी गर्नु राम्रो मानिन्छ।
Previous: दशैं पछि कता जाला सेयर बजार ?
Next: कस्तो रह्यो दक्षिण एशिया को कोभिड पछिको शेयर बजार ??